Onye minista Seychelles na -aja ndị njem nlegharị anya mma maka ịrara onwe ha nye njem nlegharị anya nke ọma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Onye minista Seychelles na -aja ndị njem nlegharị anya mma maka ịrara onwe ha nye njem nlegharị anya nke ọma
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Onye minista njem nlegharị anya nke Seychelles na ndị ndu njem
N'ime nzukọ e mere na Botanical House na Fraịde, Ọgọst 27, 2021, ya na ndị ndu njem iji lebara anya n'okwu metụtara azụmahịa ha, Minista na -ahụ maka ihe na -ahụ maka njem na njem, Sylvestre Radegonde gosipụtara afọ ojuju ya na, dị ka ndị mmekọ ndị ọzọ, otu ndị njem a. ndị ọkachamara na -etinye aka na ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ihe a na -ekwu n'atụmatụ gụnyere nchegbu ndị nduzi njem kwuru.
Minista Radegonde mesiri ndị ntuziaka njem ahụ obi ike na ngalaba njem na -arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ iji lebara nsogbu dị iche iche ha na -eme anya.
Ndị a gụnyere ngwaahịa na-emepe emepe iji rata ndị ọbịa ka ha nyochaa ọrụ na ihe nkiri dị iche iche dị, nchekwa, tarifụ n'etiti ndị ọbịa, na ndị ọzọ.
Onye ozi Radegonde kwuru, "Otu ihe na -aga n'ihu na nzukọ anyị na ndị mmekọ bụ nrara ha raara nye ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ anyị. Obi dị m ụtọ na ọ dị ka anyị niile nọ n'otu peeji ebe anyị ga -achọ ka ụlọ ọrụ a gaa. ”
N'okwu a ga -enwe mkparịta ụka na nzukọ nke onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya (PS), Sherin Francis na ndị otu ngalaba ndị ọzọ bịara, bụ nchegbu ndị ntuzi nlegharị anya wepụtara yana ịkekọrịta ụzọ ọhụrụ iji gboo nsogbu ndị a na -enwe ugbu a. na -eche ihu. Ndị a gụnyere ngwaahịa na-emepe emepe iji rata ndị ọbịa ka ha nyochaa ọrụ na ihe nkiri dị iche iche dị na njedebe, enweghị akụrụngwa, nchekwa, ọnụego agwaetiti maka ndị ọbịa, ụkpụrụ na nchegbu gburugburu ebe obibi dịka mmetọ.
Mịnịsta Radegonde mesiri ndị ndu njem obi ike na ntinye na ntinye aka nke ministri ya, na -ekwusi ike na ngalaba njem nlegharị anya na -arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ iji lebara nsogbu dị iche iche ha na -eche ihu anya yana ịmepụta ohere maka ọrụ ndị ọzọ na -enye ego n'ime ụlọ ọrụ njem.
“Ngalaba na -ahụ maka njem nlegharị anya na Office nke Mayor nke Victoria na Ngalaba Ọdịbendị, n'etiti ndị ọzọ, iji chọpụta na obere isi obodo anyị na ebe ndị ọzọ na -adọrọ mmasị na -enye ndị ọbịa anyị ahụmịhe nke mmụọ. Ụfọdụ n'ime nchegbu ndị ntuziaka njegharị anyị gosipụtara ka ngalaba anyị na -ekwu ugbu a site na ngalaba ndị ọrụ na maka okwu ndị ọzọ anyị na -eche ihu, mkparịta ụka dị ka ndị a na -enye usoro ikpo okwu maka ị nweta usoro usoro mkpokọta mkpokọta, ”ka Minista Radegonde kwuru.
PS Francis n'akụkụ nke ya kwuru na mkparịta ụka ahụ bịara n'ezi oge n'ihi na o nyere ndị otu ya ohere ịchọpụta ihe ndị dị mkpa na -emetụta ndị nduzi njem nlegharị anya na mpaghara dị mkpa na ngalaba njem nlegharị anya n'ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
“Nzukọ a emeela ka a mata ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ebe a bụrụ ahịa karịa site na atụmatụ ndị otu abụọ. N'akụkụ anyị, anyị na -agba mbọ ka anyị na ndị na -eme njem nlegharị anya na -arụ ọrụ iji bulie ọhụhụ ha site na webụsaịtị anyị na ngwa ahịa ndị ọzọ. Ọ bụ ihe na -agba ume na ebumnuche anyị niile bụ ịkwalite ahụmịhe onye ọbịa, dịka ndị otu njem nlegharị anya na -enyekwa nkwado ya site na ọrụ dị iche iche anyị na -anya ugbu a iji mejupụta oghere dị na ngwaahịa anyị, ”ka Oriakụ Francis kwuru.
Seychelles na-agụta akwụkwọ ntụzịaka 89 nọọrọ onwe ha nke nwere nchekwa na-arụ ọrụ na gburugburu Mahé, Praslin na La Digue.